Vaovao - Ahoana no fomba hamoronana boaty manintona
Ny fonosana dia misy fiarovana ho an'ny vokatra anatiny, na izany aza, miaraka amin'ny fampandrosoana ny toekarena manerantany, ny fonosana dia tokony hanome lanja fanampiny. Mba hisongadinana eo amin'ny tontolon'ny mpanjifa ankehitriny, tokony hahatratra ny "wow factor" ianao, izay mahatonga ny famolavolana fonosana ho zava-dehibe indrindra.
Fa ahoana ny famolavolana boaty fonosana manintona?
Voalohany, tsy maintsy fantarintsika izay tianao holazaina, ny toetra fototry ny vokatrao. Inona no tombony anananao raha ampitahaina amin'ny vokatra mitovy amin'ny tsena. Avy eo fantatrao ny fomba itiavanao azy.
Faharoa, mila mazava ianao hoe iza ny mpihaino anao? Raha tovovavy kely izy, dia ataovy mangatsiatsiaka sy mazava ny endriny. Raha lehilahy efa antitra nahomby dia ataovy madio sy kanto ny endriny.
Avy eo, azonao atao ny misafidy ny endrika boaty, fitaovana ary asa-tanana. Mifindra any amin'ny faritra matihanina izany. Azonao atao ny mahita ny ekipa mpamorona anao hanao izany, na manome anay hevitra / hevitra ankapobeny, afaka manampy amin'ny ambiny izahay.